မလေးရှား အစိုးရက တရားမဝင် အလုပ်သမားများကို မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုမယ့် အစီစဉ် ရွှေ့ဆိုင်း | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကို အလိုရှိနေကြတဲ့ မလေးပြည်သူလူထု
ချိန်တန်ပြီလား မလေးရှား →
ထိုသို့ ရက်အကန့်သတ်မရှိ ရက်ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ကြောင်းကို မလေးရှား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒါတွက် စရီ ဟီရှန်မူဒင် ဟူစိန် ( Datuk Seri Hishammuddin Hussein) က ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက “ တရားမဝင် အလုပ်သမားများကို ဘိုင်အို မက်ထရစ် (biometric) စနစ်နဲ့ မှတ်ပုံတင်မယ့် ကိစ္စကို နောက်ထပ် ကြေညာချက် မထုတ်ပြန်မချင်း ရက်ရွှေ့လိုက်ကြောင်း ၊ နည်းပညာပိုင်းပြသာနာ ၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေး ကိစ္စများကို အရင် ဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်ကြောင်း “ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မလေးရှားအစိုးရ အနေနဲ့ တရားမဝင် အလုပ်သမားများအား မှတ်ပုံတင်ရန် အတွက် နိုင်ငံတဝှမ်း တွင် ၆၇ နေရာ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း အခက်ခဲ အနည်းငယ် တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် လုပ်ကိုင်မဲ့ အစီစဉ် တစ်ခုလုံးကို ရပ်ဆိုင်းလိုက် ရတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ထိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မလေးရှား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက “ လုပ်ငန်းစဉ်များ အဆင်ပြေကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မလေးရှား နဲ့ စင်ကာပူကြားက စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှစ်ခု မှာ အဆင်မပြေမူလေး နှစ်ခု ဖြစ်နေကြောင်း ၊ အဲဒီ အဆင်မပြေမူလေး တခုနှစ်ခုက စနစ်တစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း “ ပြောပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တရားမဝင် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား နှစ်သန်းခန့် ရှိနေပြီး ထိုအလုပ်သမား များအား မှတ်ပုံတင်ရန် အတွက် အစဉ်စီသစ်တခုကို ဇွန်လ ဆန်းပိုင်းက စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို 6p လို့ ခေါ်တဲ့ အစီစဉ်အရ တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသား တဦးအနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ကြေး မလေးရှားရင်းဂစ် ၄၀၀ ( တရားမဝင် နေထိုင်မူအတွက် ရင်းဂစ် ၃၀၀ နဲ့ နိုင်ငံအတွင်း ဆက်လက်နေထိုင်ရန်အတွက် ရင်းဂစ် ၁၀၀ ) ပေးဆောင်ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် စစ်ဆေးမူများ ပြုလုပ်ခ၊ အလုပ်လုပ်ခွင့် အခွန်စသဖြင့် ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးပေါင်း တွက်ချက်ပါက မလေးရင်းဂစ်နှစ်ထောင်မှ သုံးထောင့်ငါးရာအထိ ကုန်ကျနိုင်ပြီး ပွဲစားများကတော့ မလေးရင်ဂစ်လေးထောင်ခန့် ကုန်ကျနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုနေကြောင်း ကွာလာလမ်ပူ နေ မြန်မာတဦးက ပြောပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံက သွားရောက်လုပ်ကိုင် သူအများအပြား ရှိပြီး များသောအားဖြင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်နဲ့ လုပ်ကိုင်နေကြသူများ ရှိသလို တရားမဝင် လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ အောက်လမ်းလို့ ခေါ်တဲ့ နယ်စပ် ကတဆင့် တရားမဝင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် နေသူများလည်း ရှိကြပါတယ်။
S0urce: Burma Today
Posted on July 14, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.